Paul Rabary : Mendrika ho filoha ve? -
AccueilRaharaham-pirenenaPaul Rabary : Mendrika ho filoha ve?
28/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ministry ny Fanabeazam-pirenena nandritra ny efatra taona i Paul Rabary, tsy isan’ireo minisitra notànana tamin’ity governemanta Ntsay Christian ity ary vao avy nanao fanambarana niteraka resabe farany teo. Mikasika izay fihetsika nasehon’i Paul Rabary izay indrindra no itondrana ny lahatsoratra androany…
Mpanao politika maro no tratran’ny vela-pandriky ny seza sy ny fahefana rehefa avy nitàna andraikitra ambony iray tao anaty fitondram-panjakana. Mitaky fahamatorana ara-moraly ny fidirana ao anaty rafi-panjakana mba hahaizana mametraka ny toerana misy ny tena rehefa tsy eo amin’ny andraikitra nanakinana ny tena intsony. Voalohany, tokony hanaiky ny tsirairay fa tsy misy olona tsy azo soloina izany. Inona no ilàna ny antsoina hoe « fifandimbiasam-pahefana » rahatoa ka misy olona iray tsy azo soloina eo amin’ny andraikitra iray? Faharoa izay mifampiankina amin’ny voalaza teo aloha, tokony miomana hatrany am-boalohany ny amin’izay fitondran-tenany, ny fifandraisany amin’ny mpiara-belona sy ny fiaraha-monina ny tomponandraikitra iray rehefa tonga io fotoana tsy maha tomponandraikitra azy intsony io. Vitsy anefa ny mahatakatra ireo zavatra roa ireo koa tsy mahagaga raha tratran’ny vela-pandriky ny fahefana tahaka izao mahazo an’i Paul Rabary izao.
Ny olom-panjakana rehetra dia olom-boahositra avokoa (minisitra, praiminisitra, filoham-pirenena), izany hoe, tsy mitovy amin’ny sata mifehy ny vahoaka tsotra izay midika ihany koa fa manana adidy sy andraikitra miavaka amin’ny olon-drehetra. Tsy maintsy misy tsiambaratelo foana anaty fitondram-panjakana na anaty antoko politika, na firenena na tany aiza manerana an’izao tontolo izao. Tahaka ny ahoana ny zava-mitranga rahatoa ka misy filoham-pirenena teo aloha iray ohatra mamoaka ny tsiambaratelo rehetra fantany nandritra ny naha teo amin’ny fitondrana azy? Mendrika azy ve ny maha olom-boahositra azy amin’izay fotoana, mendrika azy ve ny nitondra firenena? Dia mipetraka amin’i Paul Rabary koa anefa izany fanontaniana izany ankehitriny taorian’ireny fanambarana nataony farany teo ireny.
Amin’ny maha fahefana mpanatanteraka ny governemanta dia izy no manatanteraka ny politikan’ny filoham-pirenena, izany hoe, ny asa sy andraikitra rehetra ataon’ny praiminisitra sy ny mambra ny governemanta dia mizotra mankany amin’izay fampiaharana sy fanatanterahana ny politikan’ny filoha izay avokoa ka tsy tokony halaim-panahy mihitsy ny minisitra na tomponandraikitra ambony iray rehefa misy bainga voavadika fa ny tenany no manana foto-kevitra sy vina mihoatra noho ny mpaniraka azy dia ny filoham-pirenena izany.
Mazàna eo amin’io fotoana mampisy ny bainga voavadika io no manitatra ny sain’ny sasany, tahaka izao mahazo an’i Paul Rabary izao ka mahatonga azy hihevitra fa izy mihitsy no tokony ho eo amin’ny fitondrana. Programa sady fanambin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fampidirana ireo mpampianatra FRAM ho lasa mpiasam-panjakana, toraka izany koa ny fanatsarana ny politikam-pampianarana. Aza adinoina fa mpampianatra teny amin’ny oniversite ny filoha tany aloha ary isan’ny mpianany tao amin’ny INSCAE i Paul Rabary. Izany hoe, zava-dehibe loatra ho an’ny filoham-pirenena io resaka tontolon’ny fampianarana io ary efa nanana vina momba izany ny tenany ka tsy olon-kafa izay nomeny baiko hanatanteraka izany vina izany indray akory no hilaza fa « izy no tompon’ny lakile ».
Zo fototra ananan’ny olom-pirenena tsirairay na aiza na aiza toeram-piasana na antoko politika na fikambanana misy azy ny fametraham-pialana rahatoa ka misy zavatra tsy mifanaraka amin’ny feon’ny fieritreretany. Manana izay zo izay ihany koa ny mpitondra fanjakana (praiminisitra, minisitra, sns) ary tokony hanao izany mihitsy aza raha tena mahafeno ny fepetra maha olom-boahositra azy izy.
Tokony ho nametra-pialàna araka izany i Paul Rabary dia niroso tamin’ireny fanazavana nataony ireny fa tsy niandry nalàna teo amin’ny andraikitra maha ministry ny Fanabeazam-pirenena azy. Nidera azy avokoa mantsy ny olom-pirenena raha izay no zava-nitranga ary izay « sens de l’honneur » izay no tsy mazàna no tsy ananan’ny sasan-tsasany amin’ny mpitondra fanjakana eto amintsika.
Noho izany rehetra izany no ametrahana ny fanontaniana hoe: « mendrika hitondra fanjakana ve i Paul Rabary? Mahafeno ny fepetra takiana amin’izany andraikitra izany ve ny tenany? Mendrika ny antsoina ho olom-boahositra ve? Tsy manan-draharaha ahafahan’ny hafa manenjika azy koa ve?”. Aoka isika tsy ho gaga raha namorona hira mandrabiraby izany fifidianana ho filoham-pirenena sy mitondra fanjakana izany i Ramora Favori, amin’ilay hoe “demi-tour de vita, feno Canalsat hatramin’ny trano sachet…”. Ka lasa resa-jaza tahaka izao ataon’i Paul Rabary izao kosa ilay mitondra firenena!